Iyo yemukati tangi uye yekunze goko reDewar zvakagadzirwa nesimbi isina simbi, uye yemukati tangi rutsigiro system inogadzirwa nesimbi isina simbi yekuvandudza simba uye zvinobudirira kudzikisa kupisa kurasikirwa. Iko kune kudziya kwekuisa dura pakati petangi remukati uye yekunze goko. Multi-layer thermal kuputira zvinhu uye yakakwira vhoriyamu chengetedza iyo mvura yekuchengetera nguva. Iyo yakavakirwa-mukati vaporizer yakarongedzwa mukati megobvu kushandura cryogenic mvura kuita gasi, uye iyo yakavakirwa-mukati muhombe inogona kuwedzera kumanikidza kune yakafanorongedzwa kumanikidza uye kuichengeta yakadzikama panguva yekushandisa, kuzadzisa chinangwa chekukurumidza uye kugadzikana kushandiswa. Imwe neimwe yakasungirirwa gasi humburumbira ine isina simbi mhete chimiro (dziviriro mhete) kuchengetedza pombi. Mhete yekudzivirira inosunganidzwa nesirinda ine mabhureki mana, uye bhureki rimwe nerimwe rakagadzirwa kuti riitise kushandiswa kwetirosi nemakireni kutakura humburumbira hwemweya. Zvese zvinoshandiswa zvikamu zvinoiswa pamusoro peiyo humburumbira yegasi kuitira nyore kushanda. Munzvimbo yakazvimiririra yekushandisa, mushandisi anogona kunyatso kutonga mashandisiro kuburikidza nekuburitsa vharafu, booster vharafu, yekumanikidza geji, yemvura chikamu vharafu, nezvimwe. Kuitira kuona kuti mukati memvura yegasi humburumbira iri pazasi pekumanikidza kwekuchengetedza, vharuvhu yekuchengetedza uye dhisiki rinoputika rakaiswa pane humburumbira yegasi.
Inoshandiswa kutakura nekuchengetedza zvinwiwa zve cryogenic zvakaita seyakisi okisijeni, emvura senitrogen, yemvura argon, yemvura kabhoni dhayokisaidhi, LNG, nezvimwewo Iyo gasi humburumbira inogona kushandiswa kugovera gasi remvura kana gasi. Iyo gasi humburumbira iri nyore kushandisa, yakachengeteka uye yakavimbika, ine hupfumi uye yakasimba. Izvo zvakasarudzika maficha anotevera: 1. Iyo yekutsigira sisitimu yemukati tangi yakagadzirwa nesimbi isina simbi kuzadzisa chinangwa chekudzikira kupisa kupisa uye simba rakakwira. 2. Zviri nyore kushandisa uye zvinogona kuvhiyiwa zvakasununguka nemunhu mumwe chete. 3. Chengeta yakachena cryogenic mvura. Yakakura yekuchengetedza chinzvimbo. Iyo gasi yekuchengetera kugona kweDP175 dewar cylinder yakaenzana neanopfuura ka18 nguva iyo gasi yekuchengetera kugona kweyakajairika-yekumanikidza gasi humburumbira. 4. Iko kumanikidza kwemukati kwegasi humburumbira kuchakwira panguva yekumisa chikamu mushure mekuzadza. Iyo gasi humburumbira ine yakakwira-kuita kuputira system, uye yayo yekumanikidza kuwedzera mwero yakaderera. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, hapana chikonzero chekudzora kumanikidza kuburikidza nevhavha yekuchengetedza. 5. Iyo yakavakirwa-mukati supercharger uye vaporizer inogona kuona kuenderera kuenderera kwegesi kana mvura, uye hapana chikonzero chekuisa yekunze vaporizer pasi peyakagadzirirwa muyero.
Pashure: Liquid Oxygen Cylinder
Lng Bullet Matangi
Lng Tank Rudzi